सेतोपाटी ग्लोबल जर्मनी print
अदालतले १० हजार सम्मको जरिवाना तिराउन सक्ने अनुमान छ। बस चालक एम्देन कम्पनीले माफी मागिसकेको छ। ड्राइभरले रातको बेला पुरै कालो कपडाले छोपिएको मान्छेलाई आफ्नो सुरक्षाको कारण बसमा जानी जानी प्रवेश नदिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'मैले कसरी चिनु महिला हो कि पुरुष? दिनहु आतंकि हमला भैरहेका छन्. म माथि हमला भएको भए को जिम्मेवार हुन्थ्यो?'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ ०१:४१:५४